Semalt: Fanafihana fototry ny Hacker fanafihana sy ny fomba hanesorana ny tranonkala iray
Ny fahatratrarana ny tanjom-pokonanao SEO dia mety ho marimaritra iraisana noho ny antony maromaro, ny tranonkalanaoNy fiarovana no iray amin'izy ireo. Ny fiantraikan'ny fironana sy ny olana eo amin'ny sehatry ny teknolojia dia mitaky fepetra avo lenta amin'ny fepetra fiarovana.Ny antonta dia maneho fa maherin'ny 10% n'ny tranonkala midina noho ny hackers sy ny fanafihana.
Ny maha-mpividy tranokala, ny safidinao an-tserasera dia betsaka - miete lagerraum zürich. Mpampiasa matihaninaary tambajotra SEO manontolo mba hiatrehana ny fiarovana ny tranonkala dia miasa ho an'ny ankamaroan'ny orinasa miasa amin'ny aterineto. Miara miasa amin'ny SEONy fiantohana mafy ny mpividy amin'ny fiarovana ambony, manaraka ny mpifaninana ambony, ary ny famerenana backlinks amin'ny fotoana tena izy. Amin'ny farany, ny votoatinyNy mpividy dia liana amin'ny fanatratrarana ny tanjony sy ny fiverenany goavana.
Nik Chaykovskiy, Tale Mpitarika Success Successor Semalt Digital Services, dia mamelatra ny fanafihana cyber izay mila miasa.
Ny fanafihana mahery vaika
Ny antsoina hoe fanafihana an-jamba matetika dia mampiasa ny mpanafika maoderina ankehitrinyhamongotra ny rafitry ny ordinateranao. Ity karazana fanafihana ity dia mihatra amin'ny tranga tsy fahita. Ny haino aman-jery mampiasa fanafihana an-jatony mba hidirana amin'ny tranokalanaoNy antsipiriany dia mampiasa ny teknika rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Aorian'ny fidirana amin'ny solosainao, ny hackers dia afaka miditra amin'ny kaontinao sy ny tenimiafinaomandroso sy manamarina ny fahamendrehana. Na dia izany aza, mora ny mahita ny fanafihana mahery vaika satria ny rafitry ny ordinatera dia manatanteraka betsakany hetsika momba ny angon-drakitra amin'ny fotoana iray ihany.
Ny fanafihana mahery vaika dia mora hita. Ny dingana iray alohan'ny hackers dia mandoa betsaka.Mba hisakanana ny hacked amin'ny fampiasana fanafihana jamba, azonao atao ny mametra ny tantaram-panandramana amin'ny fikasana, ary manidy ny kaonty raha sendra tsy nahomby.
Ny fifandraisana eo amin'ny mpampiasa tranonkala iray sy ny valim-pifandraisana amin'ny antoko MITM..Ny hackers dia mifehy ny fiarovana ny tranokalanao amin'ny fanakanana ireo sehatra fifanakalozan-kevitra. Amin'io fomba fanafihana io, ny hackers dia mifehyny zava-drehetra tsy mahalala ny endrik'ilay mpampiasa.
fepetra fisorohana ny MITM
Mba hisakanana ny mpanafika tsy hifehezanao ny fiarovana ny tranokalanao dia mihevi-tenafirewalls, gateway amin'ny tranonkala, programme anti-virus, ary VPN. Ny fampiasana fanamafisana azo antoka eo amin'ny serivisy sy ny mpanjifa dia manampy hanakana ireo hackers.
Fanafihana amin'ny sehatra sosialy
Ny fantatra amin'ny anarana hoe engineering dia ny hevi-bahoaka dia heverina ho mora indrindrafomba hakana orinasa iray efa miorina tsara. Ireo hackers mampiasa io fomba io dia manipuleran'ny mpampiasa hampiseho ny tenimiafiny sy ny antsipiriany momba ny karatra.
Ny hackers dia manana fomba hanamboarana ny tanjona ambony indrindra amin'ny alalan'ny fifandraisana mafanamiaraka amin'izy ireo. Ny fanafihana ara-tsosialy ara-tsosialy dia mety ho voasakana amin'ny fanentanana ny olona amin'ny filàna ny fitazonana ny mombamomba azy mora vidy.
Amin'io karazana fanafihana io, ny hackers dia mandany ny fiarovana ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fanodikodinanaianao mba hikiraoka antontan-taratasy sy klioketsa misokatra. Raha manao izany ianao, dia mampiditra anao any amin'ny tranonkala malaza iray izay mampidi-doza anao hacked ny hackers.
Manentana ny sain'ny mpiasa amin'ny filànao fitandremana amin'ny fampiasana nyny aterineto dia manan-danja. Mijanona ho mailo ny hackers amin'ny fiandrasana mpiasa iray haka rindrambaiko maimaim-poana avy amin'ny tranonkala maloto, avy eo hackny fikambanana manontolo. Aoka ho mailo sy hitandrina rehefa mampiasa ny WIFI ho an'ny daholobe mba hisorohana ny tsy hacked.
Ny fanafihana fanararaotana
Ny fanafihana lavitra dia ampiasaina mba hanaparitaka viriosy maloto, mahazo fahazoana fahamatoranafampahalalana, ary mamorona famoretana ho an'ny solosaina voatokana.
Ho mailo hatrany ianao rehefa manakana ny fahalemena rehetra ao amin'ny tranokalanaompijirika. Hevero ny fampiharana ny fitsaboana iraisam-pirenena momba ny filaminana anatiny sy ivelany.
Ny fiarovana ny tranokala dia be dia be amin'ny resaka dikan-tserasera sy ny votoaty.Betsaka ny toeram-pivarotam-pandraharahana no latsaka isam-bolana noho ny fanafihana avy amin'ny hackers ratsy. Miantehitra amin'ny IT manam-pahaizana mba hitazona anao vaovao symisoroka ny tranonkalanao tsy hilatsaka intsony noho ny hacking.